Uphendule izingane zakhe izigqila zocansi | News24
Uphendule izingane zakhe izigqila zocansi
Durban - Kusabatshazwa isihluku nonya lowesilisa waseKing Dinuzulu eShowe, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal okuvele ukuthi udlwengule amadodakazi akhe amabili – esingeke siwadalule ukuwavikela.
Kuthiwa lona wesilisa ubesephendule izingane zakhe – eneminyaka engu-13 ayizalayo nenye eneminyaka engu-8 ubudala angayizali kodwa ezalwa yisinqandamathe sakhe.
Kwenzeka lokhu nje, kuthiwa umsolwa, naye eligodliwe igama lakhe, uke wagwetshwa phambilini ngalo icala lokudlwengula.
Umthombo weLANGA uthi kusolwa ukuthi lena ayizalayo uqale ukuyidlwengula ngonyaka ophelile emuva kokuba eyisole ngokuthi isiyajola.
Uthi kwesinye isikhathi ubeyiphoqa ukuba imphelezele ayokha umoba kanti uyoyigila lo mkhuba. Ngokuthola kwephephandaba ingane ize yabikela othisha esikoleni ngalokhu ngoba isihlukumezekile emoyweni.
Yibona abawuhlabe bawulawula zase ziyamkhalela umsolwa emuva kokuba nodokotela ekuqinisekisile ukuthi ingane idlwenguliwe.
Ngesikhathi le ngane iyiswa kudokotela iyohlolwa, kubhekwe nalena encane kwatholakala ukuthi nayo idlwenguliwe.
“Kuthiwa lo muntu uneside isikhathi eyidlwengula ingane yakhe. Ngokuzwa kwami, lo mkhuba uwuqale besahlala endaweni okuthiwa yiseNkanini khona eShowe, basuke lapho bayohlala eKing Dinuzulu lapho kuthiwa ubesaqhubeka nokuphendula izingane izigqila zocansi.
OLUNYE UDABA: Lihlelile elomculi owalahlwa elokudlwengula
“Lena endala uqale wayisola ngokuthi isinesoka. Uyibhambabule ngenduku ethi mayikhulume iqiniso, yize ingane ibikuphika lokho ngoba ingakwazi. Kuthiwa uyiqhubile ethi mayiyokhomba kubo kwesoka layo.
“Kusolwa ukuthi kungaleso sikhathi lapho eqale khona ukuyidlwengula ngoba kababange besaya lapho abethi mayiyokhomba khona, uyifake ndawana thize lapho efike wayidlwengulela khona,” kuqhuba umthombo.
Uthi umsolwa uboshwe okokuqala evele enayo le ngane eneminyaka engu-13 ubudala. Kuthe uma esejele unina wengane wathola omunye umuntu okuyilapho ethole khona le encane engazalwa nguyena umsolwa.
Kuthe uma esephuma ejele wabuyelana nonina wengane yakhe. Umthombo uthi kunesigameko lapho kuqubuke khona ingxabano phakathi kukamsolwa nonina wengane – ongeke adalulwe – eholele ekutheni axoshe unina wezingane – nokusolwa ukuthi yilapho eqale khona ukudlwengula lena encane eneminyaka engu-8 ubudala.
Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal uLt Colonel Thulani Zwane, uthe akhona amacala okudlwengula avuliwe kwabe sekuboshwa umsolwa oneminyaka engu-39 ubudala.